Digniin hor leh oo laga soo saaray mishaakilka dhaqaalaha ee qaarada Yurub. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Calanka Midowga Yurub
Mushkilada dhaqaalha Yurub
Digniin hor leh oo laga soo saaray mishaakilka dhaqaalaha ee qaarada Yurub.
La daabacay fredag 11 november 2011 kl 11.34
Midowga yurub ayaa soo saaray digniin ah in hoos u dhac dhaqaale uu ku imaan doono dalalka ku jira midowga iyadoona hoos udhaca dhaqaalaha ee laga digayo uu horseedi karo dib u dhac xagga dhaqaalaha oo ku yimaada kobaca dhaqaalaha ee dalalka midowga yurub kaasi oo markii dambe gaari doono guu ahaan qaarada sida uu sheegay madaxa dhaqaalaha qaaradda Yurub Olli Rehn.
Laakiin waxaa jira qubaro aaminsan in haddii la sii adkeeyo dhaqaalaha qaaradda yurub ay taasi sii xumeyn doonto mishaakilka dhaqaalaha ee imminka ka jira qaaradda.
Dhibaatada ma ahan oo keliya dalalka hadda uu heysto mishaakilka ee isticmaala lacagta Euro-da sida Giriiga iyo Talayaaniga. Waddamada sida Iswiidhan iyo Jarmalka oo si fiican u ilaaliyay faya qabka dhaqaalahooda lacag dheeri ah ka helay dhaqaalaha ayaa waxaa imminka la leeyahay in aysan isku dayin in ay lacago meel dhigtaan balse taasi bedelkeeda ay haboontahay in ay sii kabaan dhaqaalaha.
Wadamada iyaguna dhexda kaga jira mishaakilka dhaqaalaha sida Giriiga iyo Talayaaniga ayaa la sheegayaa in ay iyaguna ay haboontahay in ay helaan dhaqaale xoog badan oo sii xoojiya, sida uu leeyahay Stefan de Vylder oo ah dhaqaalayahan u hadlay istuudiyaha kowaad ee idaacadda Caalmiga ee Iswiidhan.
Dhaqaalyahanka ayaa ka digay in warbixinta uu soo saaray madaxa dhaqaalaha ee midowga Yurub in ay keeni karto wel wel ku yimaada bulshada iyo qatar la soo derista dimoqraadiyada.
Stefan de Vylder ayaa sheegay in uu ka baqayo in warbixintan laga soo saaray ee hoos u dhaca ku imaanaya dhaqaalaha midowga yurub in ay horseedi karto shaqo la’aanta oo sii kororta iyo dhibaatada bulshada oo sii badata xitaa ay keeni karto mishaakil siyaasadeed isaga oo sheegay in kooxaha neceb soo galootiga iyo kuwa wadniyada ay la tagtay in ay ka faa’ideystaan mowjadaha kaca iyo mishaakilada yimaada waxaa kale oo uu sheegay in quursiga siyaasiyiinta loo muujinayo uu sii kordhayo taasina ay qatar ku tahay dimoqraadiyada.
Dadka qaadaa dhiga siyaasadda ayaa aaminsan in midowga Yurub iyo dowladaha qaarada Yurub in ay diirada oo idil isugu geeyeen waxa laga filan karo suuqa maaliyada iyaga oo iska ilaabay cawaaqibyada ka dhalan kara mishaakilka dhaqaalaha ee hadda jira tusaale ahaan wel welka haya bulshada iyo wadajirkeeda.
Dadka ay guul darada ka soo gaartay mishaakilka dhaqaalaha ee qaaradda Yurub ayaa ah dhalinta da’da yar iyada oo dalalka Giriiga iyo Spain heerka shaqo la’aanta ee dhalinyarada ay mareyso 50 boqolkiiba waxaa sidoo kale dalalka kale ee qaaradda Yurub si weyn u sii kordheysa shaqo la’aanta dhalinyarada.